RealThadin - Page 83 of 84 - News and Media
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တွေ့ရှိသူ ၃ ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိရကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကြေငြာ
April 11, 2020 RealThadin 0
COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၁-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ၁။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ (၁၁-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ည ဓာတ်ခွဲအဖြေမျာအရ စောင့်ကြည့်လူနာများ၊ ဆေးရုံများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နေရာများ တွင် အသွားအလာကန့်သတ်၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုခံရသူများ စုစုပေါင်း (၁၆၇) […]
မင်းရာဇာအိမ်က အိမ်အကူ အမျိုးသမီးငယ်ဟာ လက်ရှိအချိန်ထိ ကြပ်မတ် ကုသနေရ
သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာအိမ်မှာ အိမ်အကူလုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်ဟာ အဖျားတက်တာတွေ၊ မူးဝေတာတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် လက်ရှိအချိန်ထိ ကြပ်မတ် ကုသ နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ ထက်ဝေအောင်က ပေးပို့ထားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာအိမ္မွာ အိမ်အကူလုပ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိုးသမီးငယ်ဟာ အဖ်ားတက္တာတြေ၊ မူးဝေတာတျြေဖစ်နေတာကြောင့် လက်ရွိအခ်ိန္ထိ ကြပ္မတ် ကုသ […]
တွေ့ပြီလား လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုအဘွားကအစ တစ်မိသားစုလုံး ၁၄ရက်စောင့်ကြည့်နဲ့ ဒုက္ခရောက်ကြရပြီ
ရက်စက်လိုက်တာ case27ရေ… တွေ့ပြီလား ကိုယ့်မိသားစုကို ဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့…. Cases 27 ဖြစ်စဉ်မှ ကလေး၊လူကြီး၊လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ အဘွား၁ဦးပါ ပါဝင်နေတယ်….. ပြည်တော်ပြန်များသတိပြုဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ….. ထိုင်းမှာရောဂါပိုးရှိနေလို့ဆေးရုံတက်နေရတာကို အလစ် မြန်မာပြည်ကိုခိုးပြန်လာတယ်တဲ့လား…. အခုကြည့်စမ်း…. ကိုယ်မိဘတွေရော…..ဘာမှမသိနားမလည်တဲ့ ကိုယ့်မိသားစုဝင်ကလေးတွေ…. သက်ကြီးရွယ်အိုအဘွားကအစ တစ်မိသားစုလုံး ၁၄ရက်စောင့်ကြည့်နဲ့ ဒုက္ခရောက်ကြရပြီ…. ကျန်တဲ့ပြည်တော်ပြန်အားလုံး ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာယူကြပါဗျာ……။တက်လူ […]
ဝင်မပါဘူးဆုံးဖြတ်ထားပြီးမှ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်ကိုကြားရတာကြောင့် ကူညီသွားမယ်ဆိုတဲ့ ယုန်လေး
ဝင်မပါဘူးဆုံးဖြတ်ထားပြီးမှ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်ကိုကြားရတာကြောင့် ကူညီသွားမယ်ဆိုတဲ့ ယုန်လေး မင်းရာဇာရဲ့ အိမ်အကူမိန်းကလေးကိစ္စကို ဝင်မပါဘူးဆုံးဖြတ်ထားပြီးမှ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်ကိုကြားရတာကြောင့် ကူညီသွားမယ်ဆိုတဲ့ ယုန်လေး ယုန်လေးဟာ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်၊ ဒါရိုက်တာ စတဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့အပြင် လူမှုကူညီရေးမှာလည်း လက်မနှေးသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားတဲ့ မင်းရာဇာရဲ့ အိမ်အကူမိန်းကလေး […]
မွေးနေ့ရှိုးပွဲလုပ်တဲ့ (၂)နာရီအတွင်းမှာ Covid-19 ကုသကာကွယ်ရေးအတွက် အလှူငွေ (၆၄၂)သိန်း နဲ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၃၀၀၀) ရရှိခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်း
ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ SAISAI BIRTHDAY SHOW in Bedroom ပွဲကြီးကို အားလုံး ကြည့်ရှုလိုက်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က Birthday Show မပြုလုပ်ခင် ငါးရက်အလိုကတည်းက နေ့ရော၊ ညပါ ကြိုးစားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီ အခုလို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ပြီးဆုံးသွားတာ ဝမ်းသာစရာပါပဲ။ […]
စည်ပင်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး အရက်သောက်ရင်း အစနောက်လွန်ကာ စကားများရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
စည်ပင်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး အတူအရက် ထိုင်သောက်ရင်း အစနောက်လွန်ကာ စကားများ ရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့တွင် သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဧပြီ ၁၁ ရက် ညနေ ၃ နာရီဝန်းကျင်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စမ်းချောင်းမြို့နယ် ရှမ်းလေးဈေး (ဂွဈေး) နှင့်မကြီးကြီး လမ်းထောင့်ရှိ […]
မင်းရာဇာ အမှုမှ တရားလိုရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင် တာမွေမြို့မရဲစခန်းအတွင်း ဝင်ခွင့်မရ
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ တာမွေရဲစခန်းရောက်ရှိချိန်မှာ ရဲစခန်းထဲကို ဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ တရားလိုရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ကပြောပါတယ်။ “စခန်းမှူးကိုကျွန်တော်က တရားလိုရှေ့နေတစ်ယောက်အနေနဲ့တယောက်တည်း တွေ့မယ်ပြောတာ တွေ့ခွင့်မပေးဘူးလေ။ ကျွန်တော်ငါးနာရီခွဲကစရောက်တယ် တခြားသူတွေကို ဝင်ခွင့်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ကျတော့ ဝင်ခွင့်မပေးဘူး။ ကျွန်တော်က ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ နစ်နာသူကလေးမလေးရဲ့ မိခင် ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်” လို့ တရားလိုရှေ့နေ […]
မွန်ပြည်နယ်တွင် စောင့်ကြည့်လူနာ သေဆုံးသူ ၁၀ ဦးထိ ရှိလာ
မွန်ပြည်နယ်တွင် စောင့်ကြည့်လူနာ သေဆုံးသူ ၁၀ ဦးထိ ရှိလာ မွန်ပြည်နယ်မှာ မတ် ၂၀ ရက်နေ့ကနေ ဧပြီ ၁၀ ရက်အထိ စောင့်ကြည့်လူနာ သေဆုံးသူ ၁၀ ဦးအထိ ရှိလာပြီလို့ မွန်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးမှူး ဒေါက်တာဝတ်မှုံက အတည်ပြုပါတယ်။ သေဆုံးခဲ့တဲ့ […]
ဘီပီအိုင်က စီဗစ် ဆေးဘူး ၇ သိန်းခန့် အမြန်ဆုံး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိမည်
ဗီတာမင်-စီ စီဗစ်ဆေးပြားတွေကို သင်္ကြန်ပိတ်ရက်တွေမှာလည်း ထုတ်လုပ်နေပြီး ကုန်ကြမ်းဈေးတက်နေပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံး ဈေးလျှော့ရောင်းပေးမယ်လို့ ဘီပီအိုင်ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်) က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အခုသင်္ကြန်ကာလ ပိတ်ရက်တွေမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Cevit Tablet (100’s) ဘူး ၅ သောင်းလောက် ထုတ်လုပ်နေပြီး …. သင်္ကြန်ပိတ်ရက်တွေပြီးရင် ဘီပီအိုင် […]
ရန်ကုန်ကုတင် ၅ဝဝ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် နပ်စ်မလေးတွေ ပါးပြင်ထက်က မျက်ရည်လေးက အသက်ပဲ
ကုတင် ၅ဝဝ. ရန်ကုန် ရဲ့ နပ်စ်မလေးတေအကြောင်းဖတ်ရင်းပုံလေးကြည့်မိတယ်… နှလုံးသားနဲ့ကြည့်ပါ ….ပါးပြင်ထက်က မျက်ရည်လေးက အသက်ပဲ… သူ့နေရာ ငါဆိုရင် လည်း ဝင်ခံစားကြည့်မိတယ် ….ဆံပင်မှာ ကပ်ရောဂါပိုး ကပ်ညှိနိုင်တယ် …. အလှအပ ကိုဘေးချိတ်ပီးရှေ့တန်းတိုက်စစ်ထွက်ရမဲ့သူတွေ အန္တာရယ်ကင်းဘို့လိုတယ် ဘေးကင်းပါစေ ချစ်သမီးတို့… အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ခေါင်းရိတ်ဘို့ ဆိုတာ […]
စေတနာကို စော်ကားသွားကြတဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ Q ဝင်တဲ့သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်…
ဇွန်လ ၁ ရက်ထီဖွင့်ပွဲတွင် ယခင်လထက် ဆုငွေနှစ်ဆကျော် တိုးမြှင့်ထား . .
ရွှေစက်တော် ဘေးမဲ့တောအတွင်းမှ ရွှေသမင် ကျော့ကွင်းပေါင်း (၁၇၀) ကျော် သိမ်းဆည်ရမိ
မိန်းကလေးစီးတဲ့ဖိနပ်တွေကို လိုက်ခိုးတဲ့သူခိုးကို မေးကြည့်တော့မှ သိလိုက်ရတဲ့အံ့ဖွယ်အဖြစ်…